Siduu ku guulaystay Cristiano Ronaldo? - BBC News Somali
Ciyaaryahanka weerarka kaga ciyaara kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu ka adkaaday labada ciyaaryahan ee Lionel Messi ee u dheela kooxda Barcelona iyo ciyaaryahan Franck Ribery ee u ciyaara kooxda Bayern Munich, waxa uuna ku guulaystay billada ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida ee 2013-kii ee loo yaqaan Fifa Ballon d'Or.
Kabtanka xulka qaranka Portugal, oo ay da'diisu tahay 28 sano, ayaa waxaa loo magacaabay ciyaaryahanka ugu laacibsan kubadda cagta dunida markiisii ugu horeysay tan iyo 2008-dii, iyadoo tababarayaasha xulalka qaranka kubadda cagta adduunka, kabtanada iyo weriyayaasha ay u doorteen Ronaldo in uu yahay ciyaaryahanka sanadka.
Ronaldo ayaa billada ku guulaystay kaddib markii uu aruursaday dhibco gaaraya 1,365, iyadoo ciyaaryahanka ku xigay ee Messi uu helay 1,205, halka Ribery uu helay 1,127, codadka la tiriyay ayaa waxaa ka mid ahaa 184 tababare, 184 kabtan qaran iyo 173 xubnood oo ka tirsan warbaahin caalami ah.
Ciyaaryahan Messi, oo 26 jir ah, ayaa billada ciyaaryahanka ugu wanaagsan ku guulaystay afartii sano ee la soo dhaafay, balse Ronaldo ayaa markan loo arkay inuu ka wanaagsan yahay kaddib markii uu 66 gool dhaliyay 56 ciyaar oo uu dheelay sanadkii 2013-kii, ciyaarahaas oo uu u saftay kooxdiisa Real Madrid iyo xulkiisa Portugal.
Waxaa goolashaasi ka mid ah saddexdii gool ee uu ka dhaliyay xulka Sweden mar xulkiisa Portugal ay isaga horyimaadeen isreebreebka Koobka Adduunka, goolashaas oo uu dhaliyay lugtii labaad ayaa waxa ay u suurtagalisay xulkiisa in ay ka mid noqdaan kooxaha tagaya waddanka Brazil ee ka qeyb qaadanaya Koobka Adduunka ee halkaa ka furmaya 148 casho kaddib.
Image caption Ronaldo waxaa uu ka tirsan yahay xulka qaranka ee Portugal
"Marka hore, waa in aan si weyn ugu mahadceliyaa dhamaan ciyaaryahanada kooxdeyda iyo xulka qaranka," Ronaldo ayaa sidaa yiri isagoo oynaya mar uu khudbadaynayay.
"Dadaalkooda la'aantood, tani ma aanay ii suurtagasheen. Aad ayaan u faraxsanahay; waa ay addag tahay in lagu guulaysto abaalmarintan."
"Waa in aan shakhsiyan u mahadceliyaa qofkasta oo gacan isiiyay - xaaskayga, saaxiibadey, iyo wiilkeyga. Waxay ii tahay farxad aad u sareysa. Waxaan oran karo waxa weeyaan waa uu mahadsan yahay qofkasta oo gacan isiiyay." Ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Cristiano Ronaldo.